Baiboly pejy 676 - Ny Baiboly
Voalohany < 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 Manaraka Farany
Efeziana toko 4 (tohiny)
26Tezera, fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. 27Aza omena fidirana ny demony. 28Izay nangalatra, aoka tsy hangalatra intsony, fa aleo miasa tànana, manao zavatra tsara, dia hanan-komena ny tsy manana aza.
29Aoka tsy haloaky ny vavanareo ny teny ratsy, fa ny teny soa mampandroso amin'ny tsara, araka izay ilaina, mba hahazoan'izay mihaino fahasoavana. 30Aza mampalahelo ny Fanahy Masin'Andriamanitra, izay nanasiana tombo-kase anareo, ho amin'ny andro fanavotana. 31Esory aminareo rahefa mety ho lolom-po, fahatezerana, fahavinirana, fitabatabana, fitenenan-dratsy, ary hasomparana. 32Fa aoka hianareo samy halemy fanahy amin'ny namany avy, ka hifampiantra sy hifamela heloka, toraka ny namelan'Andriamanitra anareo ao amin'ny Kristy.
Efeziana toko 5
Halaviro ny fahalotoana sy ny fiarahana amin'ny zanaky ny maizina - Adidin'ny mpivady.
1Koa aoka àry hanahaka an'Andriamanitra, toy ny zanaka malala hianareo. 2Ary mandehana amin'ny fitiavana tahaka ny Kristy, izay nanolo-tena tamin'Andriamanitra noho ny fitiavany antsika mba ho sorona amam-panatitra mani-pofona hamonjy antsika. 3Araka ny manendrika ny olo-masina, dia aoka tsy ho re eo aminareo na dia izay hoe lazam-pijangajangana fotsiny aza, sy rahefa mety ho fahalotoana amam-pilan-dratsin'ny nofo. 4Fadio ny teny vetaveta, resaka valavala, voso-dratsy, mbamin'ny teny tsy mendrika rehetra, fa aleo aza manao teny fisaorana. 5Satria fantatro tsara fa rahefa mety ho olona mpijangajanga, na vetaveta, na mpanarana filan-dratsin'ny nofo (mpanompo sampy izany), dia tsy handova ny fanjakan'ny Kristy sy Andriamanitra. 6Koa aza mety hofitahin'olona amin'izay lainga tsara lahatra foana, fa ireo zava-dratsy ireo no nianjeran'ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny zanaky ny tsy finoana. 7Aza miombona amin'ireny hianareo.
8Taloha hianareo no maizina, fa ankehitriny efa mazava ao amin'ny Tompo, ka mandehana toy ny zanaky ny mazava. 9Ary ny vokatry ny mazava dia ny soa, ny mety ary ny marina rehetra. 10Fantaro izay ankasitrahan'Andriamanitra. 11Aza mba mikambakambana amin'izay asan'ny maizina tsy mahavoka-tsoa, fa vao mainka ambarao aza ny haratsian'ireny, 12satria mahamenatra na dia ny hilaza fotsiny ny ataon'izy ireny an-takona aza; 13fa asehon'ny mazava avokoa ny zavatra rehetra rahefa voambara ny haratsiany, ary na inona na inona aseho, dia tonga mazava koa. 14Izany no nanoratana hoe: Mifohaza hianao izay matory, ary mitsangàna amin'ny maty, dia hanazava anao ny Kristy.
15Tandremo tsara àry ny fitondran-tenanareo, ry rahalahy, aza misary adala, fa mbà hendry; 16hararaoty ny fotoana, fa ratsy izao andro izao. 17Koa aza manaonao foana, fa fantaro aloha izay sitra-pon'ny Tompo. 18Aza mimamo divay, satria loharanom-pahalotoana izany; fa mifenoa Fanahy masina hianareo. 19Salamo sy hira aman-tononkira masina no ifampiresaho; ary hira fiderana no kaloy ao am-ponareo ho voninahitry ny Tompo. 20Misaora an'Andriamanitra Ray mandrakariva, noho ny zavatra rehetra, amin'ny anaran'i Jesoa-Kristy Tompontsika. 21Ary mahaiza mifanoa amim-pahatahorana ny Kristy.
22Hianareo vehivavy, maneke ny vadinareo, toy ny anekena ny Tompo; 23fa ny lahy no lohan'ny vavy, tahaka ny Kristy no lohan'ny Eglizy izay vatany sy manana azy ho Mpamonjy. 24Koa tahaka ny aneken'ny Eglizy ny Kristy no tsy maintsy aneken'ny vehivavy ny vadiny koa amin'ny zavatra rehetra. 25Hianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, toy ny nitiavan'ny Kristy ny Eglizy, sy nahafoizana tena ho azy, 26mba hanamasina azy rahefa nodioviny tamin'ny fanasana amin'ny rano sy ny teny izy, 27ka hanolotra azy ho an'ny tenany ho Eglizy be voninahitra, tsy misy panda, na ketrona, na zavatra toy izany, fa masina tsy manan-tsiny amam-pondro 28Toy izany koa no tsy maintsy hitiavan'ny lehilahy ny vadiny, izay tenany ihany; koa izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. 29Ny olona tsy misy mankahala ny nofony, fa mamelona sy miahy azy, toy ny ataon'ny Kristy amin'ny Eglizy, 30satria rantsam-batany, avy amin'ny nofo aman-taolany, isika. 31Noho izany, handao ny ray aman-dreniny ny lehilahy, ka hikambana amin'ny vadiny, dia ho nofo iray ihany izy roroa. 32Misy zava-miafina lehibe amin'io, dia mankamin'izy Kristy sy ny Eglizy no lazaiko. 33Fa izao: samia hianareo lehilahy tia ny vadiny tahaka ny tenany; ary aoka ny vehivavy hanaja ny vadiny.
Efeziana toko 6
Adidin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny, ary ny olom-pehezina sy ny mpifehy - Ny ady amin'ny demony sy ny fiadian'Andriamanitra fitondran'ny kristianina - Teny farany.
1Hianareo zanaka, maneke ao amin'ny Tompo ny ray aman-dreninareo, fa izany no rariny. 2Manajà ny ray aman-dreninao, io no voalohan-didy misy teny fampanantenana, dia ny hoe: 3mba hahita soa sy ho ela velona ety ambonin'ny tany hianao. 4Hianareo ray aman-dreny kosa, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa beazo amin'ny famaizana amam-pananarana ao amin'ny Tompo izy. 5Hianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amim-pahatahorana sy fangovitana, ary amim-pahatsoram-po, toy ny anekena ny Kristy; 6aza manompo eo imaso fotsiny, toy ny mila sitraka amin'olombelona, fa toy ny mpanompon'ny Kristy, manao ny sitra-pon'Andriamanitra amin'ny fo tokoa; 7ary manompoa amim-pitiavana, toy ny manompo ny Tompo fa tsy ny olombelona; 8satria fantatrareo marina fa isam-batan'olona, na andevo na olona afaka, dia samy hovalian'Andriamanitra soa, amin'izay soa nataony avy. 9Hianareo tompo koa, mba manaova toy izany amin'izy ireo, ka ajanòny ny fandrahonana, satria fantatrareo fa tsy mba mizaha tavan'olona ilay Tompon'izy ireo sy hianareo any an-danitra.
10Farany, ry rahalahy, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny heriny mahefa ny zavatra rehetra.
Pejy: Voalohany < 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3291 seconds